बिगेन तुलाधरप्रकाशित मिति: २०७८ पौष २५, आईतबार (२ हफ्ता अघि)
काठमाडौँ – ज्यापु महागुथि नेपाः येँ महानगर समितिको एकीकृत अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । हिजो बसन्तपुरमा भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गरिएको एकीकृत अधिवेशनको बन्द शत्र तथा निर्वाचन सत्र आज सम्पन्न गरिएको हो । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष २, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षका साथै १४ जना सदस्यहरुको लागि निर्वाचन गरिएकोमा दुई उपाध्यक्ष, सहसचिव, सहकोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए भने अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन गरिएको थियो ।
समाजसेवी शान्तराज डंगोलको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन समितिले येँ महानगर समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराएको हो ।
निर्वाचन सत्र अघि येँ महानगर समितिका अध्यक्ष बाबुराजा महर्जनको सभापतित्वमा संचालित बन्द सत्रबाट सचिव ई. सानु काजी महर्जनले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष ई. हेराकाजी महर्जनले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन अनुमोदन गरेका थिए ।